Gbasara Anyị | Akaụntụ
Anyị bụ ndị nwere obi ụtọ n'ezie ka ị na anyị na website Iroy.in!
Akaụntụ, a Yoruba okwu pụtara “News ma ọ bụ Report” bụ a Nigerian News na Ihe Ọmụma Base Platform na aims na-enye ndị bara uru, -ekere òkè na ihe ọmụma dị na metụtara ahịa na ahịa nsogbu, ndi oru itumgbere ahia, mmekọrịta na ndị ọzọ na n'ozuzu mbipụta. The website na oru na 1abụrụ October 2011.
On anyị otu bụ seasoned ọkachamara na afọ nke na ọdabara ahụmahụ ndị na-yiri ubi dị ka Marketing na Ahịa, Ndi oru itumgbere ahia, Mmekọrịta wdg.
Fisayo bụ a gụsịrị akwụkwọ na Yaba College of Technology. O nweela afọ nke ahụmahụ na-arụ ọrụ na òtù dị ka Skye Bank Plc, Vmobile Nigeria (ugbu a Airtel), Tsaboin oi World (ugbu a Nextek nyiwe) na Eshkol Petroleum.
Ọ na-arụ ọrụ Ike Crafts, a web imewe ụlọ ọrụ dị na Lagos, Nigeria na udeme ya entrepreneurial ahụmahụ na Nzuzo nke ndi oru itumgbere ahia website.
Anie bụ ugbu a ọkachamara, ngwọta na-eweta, na ọzụzụ na ahịa. Ọ dị ka atụmatụ a facilitator na ọzụzụ omume-etinye ọnụ site nhazi nke ọzụzụ sessions, uloru na nzukọ ọmụmụ na ahịa (na echiche, azum, na mbọn dị ka na-elekwasị anya). Ọ bụkwa n'ime ihe odide maka eBooks, atụmatụ ihe, mbipụta, scripts na ụdị ndị ọzọ nke nkwukọrịta ahịa ide.
Ya aka na-kụziri site-onwunwe-ya nke ọkachamara ikpughe a n'elu-larịị Executive, na ihe karịrị 25 afọ nke na-aga n'ihu ahịa ọrụ ibu ọrụ, n'ozuzu nọ n'ógbè nke Integrated Marketing Communications ma ọ bụ IMC - Metụtara mgbasa ozi, onye na-ere, mmekọrịta ọhaneze (PR), omume, wdg, na yana idobe okirikiri nke ngwaahịa management, kpọmkwem omume ahịa, ahịa / ahịa management, na ọhụrụ azụmahịa mmepe.
Ihe karịrị afọ iri nke n'elu oge ndidi na agadi management ọnọdụ.
N'agbanyeghị na ọ bụghị a professionally zụọ nkụzi dị ka ndị dị otú ahụ, Anie Anokuru bụ a 1980 gụsịrị akwụkwọ na Mahadum nke Lagos, Nigeria, na-enweta a Nna-ukwu Degree na Business Administration (Mba) si Ambrose Alli University, Ekpoma, Nigeria.
Barr. Yulia Kasyankova, MA, LLM, Nsote Prọfesọ
Yulia Kasyankova bụ a Russian ọkàiwu, onye edemede na lecturer. O nwere ọgaranya ndabere na-ezi, ahazi nzukọ ọmụmụ, trainings na izi ọmụmụ nakwa dị ka njem na azụmahịa iwu ize. Ọdịmma ya na-agụnye akparamàgwà mmadụ, nkà ihe ọmụma, akụkọ ihe mere eme na akwụkwọ. Ọ now bi Nigeria.
Obe Rasheed bụ a gụsịrị akwụkwọ na Accountancy si Kwara State Polytechnic, Ilorin. Inwe nwere nkà na ya si ụlọ akwụkwọ dị elu, a ghọrọ a mkpa na-achụso ihe ọmụmụ ga-eme ka ya nye ihe ọmụma na-akwado na agbanwe agbanwe. Ọ bụ ihe Aptech akwụkwọ Ọkachamara na Mgbakọ.
Ebe chọpụtara mkpa nke visuals imewe ka a ngwọta ya nkà ndabere, o wee a ubre ndịna aghụghọ na Mbipụta mmepụta si Log Bipute Media Institute, Palm Grove Lagos.
O nweela nnọọ ihe na nkwukọrịta ahụmahụ Mercury Birds Limited, a nkwukọrịta ahịa na ụlọ ọrụ, ugbu mmepụta njikwa, Echonews Akwụkwọ akụkọ Limited, a akwụkwọ akụkọ, media na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nnyocha ụlọ ọrụ.
Victor mara mma
Vicreativity dị ka anyị na-akpọ ya bụ ihe Undergraduate nke University nke Lagos amụ mgbakọ na mwepụ. O nwere cognitive ahụmahụ na graphic aghụghọ, web aghụghọ, n'ozuzu branding na ọ bụ ezigbo onye nkụzi kwa. 🙂
Ọ bụ ya bụ Brand Manager nke ISUD Crafts na-arụ ọrụ na Inside Watch Africa Magazine.